ကောင်းမွန်ဝင်း: အသက်ရှည်ချင်ရင် အစားလျှော့စားပါ
တရုပ်နိုင်ငံ နန်ကျင်းပြည်နယ်(http://en.wikipedia.org/wiki/Nanjing) က ယန်းစီညနေပိုင်းသတင်းစာYangtse Evening Post မှာ ပါတဲ.ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်က လူလတ်ပိုင်းအရွယ်တွေအတွက် ကျမ္မာရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကို လမ်းညွှန်ထားတာကတော့ “အသက်ရှည်ရှည်နေနိုင်ရန်အတွက် ဂျပန်လူမျိုးတွေလို အစားနည်းနည်းစားခြင်းသည် အဓိကဖြစ်သည် ”လို. ဆိုထားပါတယ်။
ဆောင်းပါးမှာဖေါ်ပြထားတာကတော့။ တရုပ်နိုင်ငံမှာ အစားငတ်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရတာတွေဟာ သမိုင်းမှာ မြောက်များစွာရှိခဲ့တော့ လူတွေဟာ “အစားဆိုတာ များများစားမှ ” ဆိုတဲ. အယူအဆက အစွဲကြီးစွဲနေကြကြောင်း။ အထူးသဖြင့် အသက်အရွယ်ရစပြုလာတဲ.အချိန်တွေမှာ အစားများလို. အဟာရလွန်ကဲပြီး ကျမ္မာရေးအတွက် ထိခိုက်နစ်နာ တဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်ကြောင်း။
ဆက်လက်ပြီးဆောင်းပါးမှာ ဖေါ်ပြထားတာကတေ့ာ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ.ပျမ်းမျှသက်တမ်းဟာ ၈၂နှစ်ဖြစ်ပြီး ဒါဟာ ကမ္ဘာ့စံချိန်ရဲ. အသက်အရှည်ဆုံးသက်တမ်းဖြစ်တာကိုပါ။ ဒီလို အသက်ရှည်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးထဲက အဓိကတစ်ခုကတော့ အသောက်အစားကို ပမာဏနဲနဲပဲ စားသုံးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ “ဂျပန်ကိုရောက်ဘူးတဲ.သူတွေအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဂျပန်က စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ အစားအသောက်တွေထွက်လာရင် တကယ့်ကိုနည်းနည်းလေးပဲ။ လက်တွေ.ဂျပန် နိုင်ငံမှာ လူဝကြီးတွေဆိုတာက ဆူမိုနပန်းသမားတွေပဲ။ သာမန်လူအများစုကတော့ ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်စမတ်ကျကျ တွေပါ”ပဲတဲ.။
တဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင် “တရုပ်နိုင်ငံ ရှန်ဟိုင်းဟာ တရုပ်နိုင်ငံရဲ. အသက်ရှည်သူအများဆုံး နေထိုင်ရာဒေသဖြစ်ပြီး ၂၀၀၆ခုနှစ်သုတေသနပြုချက်များအရ အရှည်ဆုံးပျမ်းမျှသက်တမ်းအရှည်ဆုံးဟာ ၈၀နှစ်ကနေ ၉၇နှစ်အထိဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံနီးပါးလောက်ရှိပါတယ်။ ရှန်ဟိုင်းသားတွေ အစားနည်းတာလည်း နံမယ်ကြီးပါတယ်။ ” “ရှန်ဟိုင်းမှာ အိမ်ကိုခေါ်ထမင်းဖိတ်ကျွေးရင် ထမင်းဟင်းတွေက နည်းလို. ““သိပ်ခင်ခင်မင်မင်မရှိလှဘူးလို. ””သံသယဖြစ်တဲ.သူတွေတောင် ရှိပါတယ်။ သူတွေရဲ့ပုံမှန် စားတဲ.ပမာဏ ကိုက အဲဒီလောက်ပါပဲ။
တရုပ်နိုင်ငံဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ. မြို.ကြီးတွေကို ဗဟိုပြုပြီး စားသောက်မှုအဆင့်အတန်း ခေတ်မှီမြင့်မားကြွယ်ဝလာတာနဲ.အတူ ရောဂါအသစ်အဆန်းများလည်း ခံစားလာရနေကြရပါတယ်။ အခုဆိုရင် အ၀လွန်တဲ. ခလေးသူငယ်များလည်း များပြားပြီး လူနေမှုဘ၀သစ်ရဲ. ပြဿနာအသစ်တစ်ခုကို တွေ.ကြုံနေကြရပါတယ်။
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Thursday, August 06, 2009
ဂျပန်ဗူးသီး နဲ. ကျွန်မ
ဂျပန်မှာ အလုပ်လုပ်တာ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရသလဲ